Monday October 17, 2016 - 21:12:02 in Wararka by Xafiiska Muqdisho
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, ganacsato iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo ka hadlay furitaanka mashruucaan ayaa sheegay in dadaal badan ka dib lagu guulestay in mashruucan laga hirgeliyo Soomaaliya, oo ay in ka badan 1000 qofood shaqo abuur u noqoneyso.
Waa mashruuc casri ah sida aad u jeedaan qalabka la soo bandhigay, kuwaas oo nadaafada caasimada kaalin mug leh ka qaadan doona, soona celin doona bilicda caasimada.
"Caasimada Muqdisho waa muraayada dalka, sidaas daraadeed mashruucan nadaafada waxuu soo celinayaa bilicdii ay caasimadu laheyd.
Horumarka uu dalku ku tallaabsanayo maalin walba waxey keentay in shirkadaha maxaliga ah fursad loo siiyo ay dalka ku horumariyaan.
Nadaafadu waa waajib diini ah oo nooga wada baahan inaan ka wada shaqeyno.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Ugu dambeyntii Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo Qurbojoogta Soomaaliyeed inay dalkooda maalgeshtaan tanoo fursad u ah in dhalinyaradeena aan shaqo u abuurno.
15/04/2017 - 11:03:15
Imaaraadka Oo Safiirka Soomaaliya u Fadhiya Deg Deg Ugu Yeertay
05/03/2017 - 13:46:52
Madaxweynihii Hore Ee Soomaaliya Oo Maanta Xil Loo Dhaariyay
04/03/2017 - 14:36:50